မင်္ဂလာဆောင်ထားတာက (၃)လပဲရှိသေးတယ်. . . မိန်းမဖြစ်သူက ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်. . .ယောင်္ကျားလုပ်သူက စနိုက်ကျော်မနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ အဖြစ်…! - Lodarya
April 6, 2019 Lodar Ya Knowledge, ကြားသိရသမျှ 0
ကျွန်​မတို့ယူထားတာ 3လနီးပါးရှိ​နေပါပီ…3လအတွင်းမှာ လင်​မယားသဘာဝ စကားအနည်းငယ်​များတာ​လေး​တော့ ရှိတာ​ပေါ့…ကျွန်​မက အလုပ်​သွားတယ်​ သူက သူငယ်​ချင်း​တွေနဲ့အ​လေလိုက်​တယ်​…လူငယ်​မို့လို့ ဒါကို အပြစ်​မမြင်​ပါဘူး…ကျွန်​မအ​မေကအစ သူ့ကို သားသမီးအရင်းလိုသ​ဘောထားပါတယ်​….
အဲ့လိုနဲ့​နေရင်း​နေရင်း သူ့အချိုး​လေး​တွေ စ​ပြောင်းလာပါ​တော့တယ်​…လိုင်း​ပေါ်က ​ကောင်​မ​တွေနဲ့ ရူပ်​လာပါတယ်​…ဒါကိုကျွန်​မသိ​တော့ ​ပြောပြပါတယ်​…သူ့ဘက်​က ပြင်​ပါ့မယ်​ဘာညာ​ပြော​တော့ သူ့ကိုချစ်​တဲ့စိတ်​နဲ့ခွင့်​လွှတ်​​ပေးထားပါတယ်​…တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်​မအလုပ်​က ​မော​မောပမ်းပမ်းနဲ့ပြန်​လာတာ​တောင်​ ကြိုမယ့်​​ယောကျာ်း မရှိဖြစ်​လာတယ်​..
.ကျွန်​မလဲ လူပဲ ခံစားတတ်​တာ​ပေါ့ ကိုယ်​ချစ်​လို့ယူထားတဲ့​ယောကျာ်း ​မော​မောပမ်းပမ်းနဲ့ အလုပ်​က ပြန်​လာရင်​ မြင်​ချင်​ ​တွေ့ချင်​တာ​ပေါ့…သူက​တော့ မနက်​ 7:00 ​လောက်​ကတည်းက ထွက်​သွားတဲ့ အသွား ည 8:00 နဲ့​တောင်​ ပြန်​မ​ရောက်​လာဘူး….ကျွန်​မလဲ ချစ်​တဲ့​ဇောနဲ့ ​တောင်းပန်​တယ်​…သူတွဲတဲ့လိုင်း​ပေါ်က ​ကောင်​မ​တွေကအစလိုက်​​တောင်းပန်​ပါတယ်
ဒါကိုကျွန်​မကို သူ့သူငယ်​ချင်း​တွေကအစ ဝိုင်းပီး ပိုးစိုးပက်​စက်​​ပြောကြပါတယ်​…​ခွေးမျိုး အဆင့်​အတန်းမရှိဘူး…ဘာဖြစ်​တယ်​ ညာဖြစ်​တယ်​နဲ့ ကျွန်​မအ​မေဆို စိတ်​မ​ကောင်းအ​တော်​ဖြစ်​သွားတယ်​ထင်​ပါတယ်​….အရမ်းအားနာမိတယ်​….အခုဆိုသူ့လိုင်း​ပေါ်က ​ကောင်​မဘက်​က ​ငွေလွဲတာ​တွေ​တောင်​ ရှိလာ​တော့…သူစပီး ပုန်​ကန်​လာပါ​တော့တယ်​…
လိုင်း​ပေါ်မှာ ချစ်​ပြ​နေလိုက်​ကြတာများမိုးမမြင်​​ ​လေမမြင်​​တွေဖြစ်​​နေပျက်​​နေလိုက်​တာ…ကျွန်​မကိုလဲ Bl ထားတယ်​…သူ့မိဘ​တွေကို ​ပြောပြ​တော့လဲ အင်းမလုပ်​ အဲမလုပ်​နဲ့ စိတ်​အ​တော်​ပျက်​ဖို့​ကောင်းလွန်းတယ်​….ကျွန်​မဘက်​က သူဒီလိုလုပ်​လို့ ငါပြန်​လုပ်​မယ်​ဆိုတဲ့ စိတ်​မရှိပါဘူး….ဒါ​တောင်​မှ ရှာ​ကျွေး​နေတဲ့ မျက်​နှာ​တောင်​မ​ထောက်​လုပ်​ရက်​ကြတယ်​…
.ကျွန်​မလဲ မခံစားနိုင်​​တော့လို့ ဒီစာ​လေးနဲ့ သူတို့ပုံကို တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​….အများသိ​အောင်​ဝိုင်းShare ​ပေးကြပါအုံး….ရုပ်​​လေးသနားကမားနဲ့ $ရှက်​မရှိတဲ့ အခွက်​​တွေ…..နှမသားချင်းစာနာ​သောအားဖြင့်​……
မူရင်းအရေးအသားအတိုင်း တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သည်းခံဖတ်ပေးပါနော်
ကြှနျမတို့ယူထားတာ 3လနီးပါးရှိနပေါပီ…3လအတှငျးမှာ လငျမယားသဘာဝ စကားအနညျးငယျမြားတာလေးတော့ ရှိတာပေါ့…ကြှနျမက အလုပျသှားတယျ သူက သူငယျခငျြးတှနေဲ့အလလေိုကျတယျ…လူငယျမို့လို့ ဒါကို အပွဈမမွငျပါဘူး…ကြှနျမအမကေအစ သူ့ကို သားသမီးအရငျးလိုသဘောထားပါတယျ….
အဲ့လိုနဲ့နရေငျးနရေငျး သူ့အခြိုးလေးတှေ စပွောငျးလာပါတော့တယျ…လိုငျးပျေါက ကောငျမတှနေဲ့ ရူပျလာပါတယျ…ဒါကိုကြှနျမသိတော့ ပွောပွပါတယျ…သူ့ဘကျက ပွငျပါ့မယျဘာညာပွောတော့ သူ့ကိုခဈြတဲ့စိတျနဲ့ခှငျ့လှတျပေးထားပါတယျ…တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကြှနျမအလုပျက မောမောပမျးပမျးနဲ့ပွနျလာတာတောငျ ကွိုမယျ့ယောကျြား မရှိဖွဈလာတယျ..
.ကြှနျမလဲ လူပဲ ခံစားတတျတာပေါ့ ကိုယျခဈြလို့ယူထားတဲ့ယောကျြား မောမောပမျးပမျးနဲ့ အလုပျက ပွနျလာရငျ မွငျခငျြ တှခေ့ငျြတာပေါ့…သူကတော့ မနကျ 7:00 လောကျကတညျးက ထှကျသှားတဲ့ အသှား ည 8:00 နဲ့တောငျ ပွနျမရောကျလာဘူး….ကြှနျမလဲ ခဈြတဲ့ဇောနဲ့ တောငျးပနျတယျ…သူတှဲတဲ့လိုငျးပျေါက ကောငျမတှကေအစလိုကျတောငျးပနျပါတယျ…
ဒါကိုကြှနျမကို သူ့သူငယျခငျြးတှကေအစ ဝိုငျးပီး ပိုးစိုးပကျစကျပွောကွပါတယျ…ခှေးမြိုး အဆငျ့အတနျးမရှိဘူး…ဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျနဲ့ ကြှနျမအမဆေို စိတျမကောငျးအတျောဖွဈသှားတယျထငျပါတယျ….အရမျးအားနာမိတယျ….အခုဆိုသူ့လိုငျးပျေါက ကောငျမဘကျက ငှလှေဲတာတှတေောငျ ရှိလာတော့…သူစပီး ပုနျကနျလာပါတော့တယျ…
လိုငျးပျေါမှာ ခဈြပွနလေိုကျကွတာမြားမိုးမမွငျ လမေမွငျတှဖွေဈနပေကျြနလေိုကျတာ…ကြှနျမကိုလဲ Bl ထားတယျ…သူ့မိဘတှကေို ပွောပွတော့လဲ အငျးမလုပျ အဲမလုပျနဲ့ စိတျအတျောပကျြဖို့ကောငျးလှနျးတယျ….ကြှနျမဘကျက သူဒီလိုလုပျလို့ ငါပွနျလုပျမယျဆိုတဲ့ စိတျမရှိပါဘူး….ဒါတောငျမှ ရှာကြှေးနတေဲ့ မကျြနှာတောငျမထောကျလုပျရကျကွတယျ…
.ကြှနျမလဲ မခံစားနိုငျတော့လို့ ဒီစာလေးနဲ့ သူတို့ပုံကို တငျပေးလိုကျပါတယျ….အမြားသိအောငျဝိုငျးShare ပေးကွပါအုံး….ရုပျလေးသနားကမားနဲ့ $ရှကျမရှိတဲ့ အခှကျတှေ…..နှမသားခငျြးစာနာသောအားဖွငျ့……
မူရငျးအရေးအသားအတိုငျး တငျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ သညျးခံဖတျပေးပါနျော